बीएसडब्लू पढ्न कति लाग्छ खर्च ? कहाँ पढ्ने ?
Fri, Mar 05, 2021२१ फागुन, २०७७
झापाकी सृष्टि खरेललाई सुरुमा ‘शिलापत्र उज्ज्वल स्कलरसिप’ पाऊँला भन्ने विश्वास नै थिएन ।
‘शतप्रतिशत स्कलरसिप भनेको छ । के मैले पाऊँला र ?’, उनको मनमा यस्तैयस्तै प्रश्नहरू उब्जिइरहेका थिए । यद्यपि, उनले स्कलरसिपका लागि नेपाल एडुफेयरमा गएर फारम भरेकी थिइन् ।
शिलापत्रले अघिल्लो वर्ष आयोजना गरेको नेपाल एडुफेयरमा ३ हजार जनासँग प्रतिस्पर्धा गरेर ब्याचलर इन सोसियल वर्क (बीएसडब्लू) कोर्स उनले स्कलरसिपमा पढ्ने अवसर पाइन् । उनी अहिले के एन्ड के कलेजमा प्रथम वर्षमा अध्ययनरत छिन् ।
सृष्टि भन्छिन्, ‘सामाजिक काम गर्नकै लागि यो विषय रोजेकी हुँ । हाम्रो समाजलाई राम्रो बनाउन सक्यौँ भने पो देश भन्छ । समाजमा अनेकन समस्या छन् । ती समस्याको समाधान गर्न बीएसडब्लू पढेकी हुँ ।’
मेगा कलेजबाट बीएसडब्लू उत्तीर्ण गरेकी सृजिता चौँलागाईंले प्लस टुमा विज्ञान विषय पढेकी थिइन् । सानैदेखि सामाजिक काममा चासो राख्ने सृजिताले स्नातकमा बीएसडब्लू रोजिन् । अहिले उनी आफ्नो विचार स्पष्ट राख्न सक्ने भएको बताउँछिन् ।
सृजिता भन्छिन्, ‘हरेक क्षेत्रमा हाम्रो व्यवस्थापन कस्तो छ ? कसरी साना–साना कदमले पनि ठूला–ठूला परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेल्छन् भन्ने कुरा अध्ययन गर्दागर्दै सिक्न पाएँ । व्यक्तिगत विकास र आफ्नो विचार स्पष्टसँग राख्न सक्ने भएँ । कोर्स पूरा हुँदा काम पनि गर्ने अवसर मिल्यो ।’
सृष्टि र सृजिता मात्र होइन, पछिल्ला वर्षमा बीएसडब्लूतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो छ । यो कोर्स पढ्ने विद्यार्थीको संख्या वर्षेनि बढिरहेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
कस्तो कोर्स हो ?
ब्याचलर इन सोसियल वर्क मानविकी संकायअन्तर्गतको चारवर्षे कोर्स हो । ११ र १२ मा जुनसुकै विषय पढेकाले यो विषय पढ्न पाउँछन् । यो कर्स पढ्नका लागि २ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्छ ।
यो कोर्समा व्यक्ति र समाजमा देखिएका समस्यालाई वैज्ञानिक तवरले दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सिकाइन्छ । व्यक्ति र समाज केबाट पीडित छ, त्यसको अध्ययन र अनुसन्धान गरेर समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्छ ।
सबै ठाउँमा राज्यको आँखा पुग्दैन । यसले ती ठाउँमा पुगेर पीडित व्यक्ति र समाजको समस्या समाधानका लागि राज्यसँग पुलको काम गर्न सहयोग गर्ने शिक्षासेवकहरू बताउँछन् ।
समाजको योद्धा निर्माण
साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेजका कार्यक्रम संयोजक राजेन्दप्रसाद्र लामिछाने बीएसडब्लू कोर्सले समाजको योद्धा उत्पादन गर्ने बताउँछन् ।
‘नेपाललगायत विश्वका देशहरू सामाजिक, राजनीतिक आर्थिक रूपमा पछाडि पर्नुको कारण के हो ? विद्यार्थीले त्यसको पहिचान, अध्ययन र अनुसन्धान गरेर रिपोर्ट तयार पार्ने हो । समाधानको उपाय पनि पत्ता लगाउने हो’, उनी भन्छन्, ‘समाजको एक असल योद्धा बन्न सक्छ । उत्तीर्ण भएपछि मार्केट खोज्न जानै पर्दैन, मार्केटले नै तपाईंलाई खोज्छ ।’
सामाजिक अभियन्ता बन्न
के एन्ड के कलेजका उपप्राचार्य दीपक पौडेल बीएसडब्लू कोर्सले मानविकीको गरिमा बढाएको बताउँछन् । ‘मानविकी पढ्ने तल्लो तहको भन्ने बुझाइ थियो । बीएसडब्लूले त्यो गलत सावित गरेको छ । यो डायनामिक कोर्स हो’, उनले भने, ‘विद्यार्थीले चार दिन कक्षामा र दुई दिन फिल्डमा गएर सिक्न पाउँछन् ।’
यो कोर्स पढेर सामाजिक अभियन्ता बन्न सकिने उनी बताउँछन् । ‘प्रत्येक विद्यार्थीमा फरक क्षमता हुन्छ । उसले फरक कुराको अभाव समाजमा देख्छ । त्यसको निरूपण गर्नका लागि विद्यार्थीले काम गर्छन्’, उनी भन्छन्, ‘संघसंस्थामा काम गर्न र सामाजिक अभियन्ता बन्न सकिन्छ ।’
समुदायका समस्या समुदायमै बसेर समाधान गर्न
काठमाडौं मोडेल कलेजका प्रिन्सिपल सुरेन्द्र सुवेदी बीएसडब्लू कोर्सले समुदायमा भएका समस्यालाई समुदायमा नै बसेर समाधान गर्न सिकाउने बताउँछन् । ‘समुदायमा भएको समस्या समुदायमा नै बसेर समाधान निकाल्न सिकाउँछ’, उनले भने, ‘जसले समाजको परिवर्तनको खाँचो देख्छ । त्यस्ता विद्यार्थीका लागि यो कोर्स उपयुक्त हुन्छ ।’
समाजको विज्ञान बुझ्दा मात्र अरू विज्ञानले काम गर्ने उनको तर्क छ । ‘समाजको विज्ञान बुझ्दा मात्रै अरू विज्ञानले काम गर्छ’, उनी भन्छन्, ‘विज्ञान प्रविधि मान्छेका लागि हो । मान्छे प्रविधिका लागि होइन । पछिल्लो समय टेक्नोलोजीले मानवीयता बिर्संदै गएको छ । त्यसका लागि पनि बीएसडब्लू कोर्स आवश्यक छ ।’
नेतृत्व क्षमताको विकास
बर्नहार्ट कलेजका प्रशासनिक निर्देशक राम थापाले यो कोर्स पढेकाले सहज तरिकाले नेतृत्वदायी भूमिका निभाउन सक्ने बताए । ‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने अवसर मिल्छ । आफैँ संस्था खोलेर काम गर्न पनि सकिन्छ । यो कोर्स पढेकाले सहज तरिकाले नेतृत्वदायी भूमिका निभाउन सक्छन्’, उनले भने ।
बिहान पढेर दिउँसो काम गर्न सक्ने भएकाले बीएसडब्लू पढ्ने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएको उनको बुझाइ छ । ‘यो कोर्स सबैले पढ्न पाउँछन् । फिल्डमा जानै पर्छ । बिहान पढेर दिउँसो अफिस पनि जान सकिन्छ’, उनले भने ।
बेरोजगार बस्नु पर्दैन
सेन्ट लरेन्स कलेजका कार्यक्रम संयोजक राजेहमान सिंह यो कोर्स पूरा गरेपछि बेरोजगार बस्नु नपर्ने बताउँछन् ।
‘यो विषय पढेर देशमा केही गर्छु भन्नेका लागि राम्रो अवसर छ । चार वर्ष पढ्दा एक वर्ष कामको अनुभव पनि हुन्छ’, उनले भने, ‘पढिसकेपछि काम जागिर नै हुन्छ ।’
कुनै पनि संस्थाको नेतृत्व तहमा यो कोर्स पढेकाे व्यक्ति हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘सरकारी विभिन्न पोस्टमा अरू विषय पढेकाले लिड गरिरहेका छन्’, उनले भने, ‘सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको नेतृत्व यो कोर्स पढेकाले गर्नुपर्छ । यो विषय पढेर विद्यार्थी अस्ट्रेलिया, क्यानडा र अमेरिका जाने पनि धेरै छन् ।’
अर्किड कलेजका प्रिन्सिपल बिदुर दाहालले पछिल्लो समय युवामा समाजसेवाप्रति चाहना बढेकाले यो कोर्सको महत्त्व बढेको बताउँछन् । ‘युवाहरूमा सोसियल उद्यमी बन्न र सामाजिक काम गर्ने चाहना बढेको छ । पहिले पढेपछि जागिर खानैपर्छ भन्ने सामाजिक मान्यता नै थियो । अहिले समाजका लागि केही गरौँ भन्ने सोच भएका पनि छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा काम गर्न पनि यो कोर्स पढ्नेको संख्या बढेको छ’, उनले भने ।
कहाँ कहाँ छ अवसर ?
यो कोर्स पढेपछि धेरै क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर मिल्छ । लोकसेवा परीक्षा पास गरेर सरकारी क्षेत्रमा काम गर्छु भन्नेका लागि पनि बाटो खुला छ । विशेषत: राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था र अनुसन्धान क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर मिल्छ ।
कहाँ पढ्न पाइन्छ ?
के एन्ड के कलेज, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं
साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेज, बसुन्धरा, काठमाडौं
टेक्सास इन्टरनेसनल कलेज, चाबहिल, काठमाडौं
काठमाडौं मोडेल कलेज, बालकुमारी, ललितपुर
बर्नहार्ट कलेज, बाफल, काठमाडौं
सेन्ट लरेन्स कलेज, चाबहिल, काठामाडौं
क्यानभास इन्टरनेसनले कलेज, बसुन्धरा, काठमाडौं
गोल्डेनगेट इन्टरनेसनल कलेज, बत्तीसपुतली, काठमाडौं
आदिम नेसनल कलेज, चाबहिल, काठमाडौं
नेपाल मेगा कलेज, बानेश्वर, काठमाडौं
लिभरपुल इन्टरनेसनल कलेज, बानेश्वर, काठमाडौं
अर्किड कलेज, गौशाला, काठमाडौं
जया देवकोटा कलेज, जोरपाटी काठमाडौं
जेभियर कलेज,कालोपुल, काठमाडौं
जनभावना क्याम्पस, ललितपुर
कादम्बरी मेमोरियल कलेज, बुद्धनगर काठमाडौं
जनता आदर्श क्याम्पस, मोरङ
सेन्ट जेभियर कलेज, काठमाडौं
केयू–गेटको नयाँ कार्यक्रम ‘बीपीएच’ : पढ्दै सिक्दै, सिक्दै कमाउँदै
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २, २०७७, ११:२०:१५
बजेट लेखनमा नयाँ टीम, २४ प्रतिशतसम्म बजेट बढ्न सक्ने बजेट लेखनमा नयाँ टीम, २४ प्रतिशतसम्म बजेट बढ्न सक्ने5min read
आफ्नै मतदाताबीच बोल्दाबोल्दै किन मञ्च छोड्न बाध्य भए अर्थमन्त्री पौडेल ? आफ्नै मतदाताबीच बोल्दाबोल्दै किन मञ्च छोड्न बाध्य भए अर्थमन्त्री पौडेल ?2min read
ओली र विप्लव एउटै मञ्चमा [फोटो फिचर] ओली र विप्लव एउटै मञ्चमा [फोटो फिचर] 1 min read
अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला अवार्ड पाएकी मुस्कान भन्छिन्, ‘हिंसाविरुद्धको आवाज बन्नेछु’ रोजी म्यामको फोनले मुस्कानलाई सर्प्राइज दियो । सुरुमा त उनलाई विश्वास नै लागेन । ठूलो अवार्ड पाउँछु भन्ने मुस्कानले सोचेकी पनि थिइनन् । तर, आशा भने मुस्कानलाई रहेछ4min read
पार्टी र जनतालाई हित हुनेगरी कांग्रेसले निर्णय लिन्छ : शशांक कोइराला2min read
मोतीपुर शिलान्यास घटनाबारे प्रचण्ड-नेपालले भन्यो : सामन्तवादको झझल्को दिलायो2min read
खल्तीबाट मान्छे नियुक्ति गर्दाको असर निर्वाचन आयोगमा देखियो : प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवसँगको अन्तर्वार्ता 15 min read
बजेट लेखनमा नयाँ टीम, २४ प्रतिशतसम्म बजेट बढ्न सक्ने5min read
पर्ख र हेरकै दुविधामा अलमलियो कांग्रेस संसदीय दलको बैठक2min read
पार्टी एकतालाई लिएर मन्त्रिपरिषदमा दुई धार, फुटाउन र जुटाउन ओलीलाई छुट्टाछुट्टै दबाब6min read
जब नवीन्द्रराज जोशीले दबाई खान उठाएकाे हात बाउँडियो...5min read
झापाका खेत–खेतमा ठडिए केपी ओली, आली र गह्राहरूमा राखिए उनीभन्दा अग्ला तस्वीर3min read
ढुंगामुढापछि बोल्दाबोल्दै छाडेर निस्किए अर्थमन्त्री [तस्वीरहरू] 1 min read
प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिप्रति पूर्वउपकुलपतिहरूको आपत्ति, प्राज्ञिक मर्यादाको पालना गर्न आग्रह2min read
पहिलेका महेन्द्र, अहिलेका खड्ग6min read
पढ्ने र लड्ने नयाँ पुस्तामा सरेको नागरिक आन्दोलन2min read
महासंकटमा सुतेको संसद्‍ले अब के गर्छ ? 12 min read
हृदयमा बसेका शाह सर 12 min read
हाम्रो पात्रोमा अब अंग्रेजी सिक्न सकिने2min read
देवदहमा बौद्ध विश्वविद्यालयको डीन कार्यालय3min read
जातीय अपमान खप्न नसकेर बीचैमा स्कुल छाड्छन् वादी समुदायका केटाकेटी3min read